Maraykanka iyo Ingiriiska oo shaaciyey iney xoojinayaan taageerada ay siiyaan dowlada Somalia‏.
Dowladdaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa ka wada hadlay arrimaha dalal ay Soomaaliya ka mid tahay, waxaana Johne Kerry Xoghaya arrimada dibadda Mareykanka iyo dhigiisa Ingiriiska William Hague ay si gaar ah kaga wada hadleen arrimaha Soomaaliya.
Labada masuul ayaa isla soo qaaday xaaladaha dalalka Maali Iyo Soomaaliya, waxayna ka wada hadleen sidii looga hortagi lahaa halista kooxaha Islaamiyiinta ah ee ku sugan qaaradda Afrika gaar ahaan Soomaaliya sida ay yiraahdeen.
Wasiirka arrimaha dibadda Ingariiska Williuma Hague ayaa dhigiisa Mareykanka Johne Kerry uga warbixiyay shirkii London ee hogaamiyaasha Soomaalida loo qabtay sanadkii hore, waxayna labada mas’uul sidoo kale isla soo hadal qaadeen dardargelinta wadahadalada Soomaaliya loo qabanayo.
Sidoo kale labada mas’uul waxay isla garteen taageeridda howlgalada lagu dagaalamayo kooxaha Islaamiyiinta ah ee ka dagaalamaya dalalka Maali iyo Soomaaliya, waxayna mas’uuliyiintaasi sheegeen in Soomaaliya ay ka taageeri doonaan qeybaha kala duwan ee ciidamada sida kuwa Militariga iyo Boliiska, ilaalinta xuduudaha, cadaalada iyo weliba dhinaca dhaqaalaha sida lagu daabacay barta ay wasaarada arrimaha dibadda Mareykanka ku leedahay Intrernetka.
Dowladda Ingiriska ayaa la filayaa in Bisha may ee soo socota magaalada Landon ay markale ku martigeliso shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya kaasoo ay ka qeyb galayaan dhinacyada siyaasada Somalia iyo dalalka caalamka ee arimaha Somalia daneeya.
Maamulka gobolka Sh/hoose oo sheegay iney Al-Shabaab kala wareegeen degaano cusub.
Gudoomiyaha gobolka Sh/hoose ee dowlada Somalia C/qaadir Maxamed Nuur Siidii oo saxaafada la hadlayey ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM ay degaano hor leh ka saareen xoogaga Al-shabaab.
C/qaadir Maxamed Nuur Siidii ayaa intaa ku daray in degaano ku yaala nawaaxiga degaanka Leego lagala wareegay Al-shabaab kuwaasoo ay ka mid yihiin Dudumo-Guduud, Warta-madax Maroodi iyo qaar kale, isagoo xusay in ciidamada dowlada iyo kuwo AMISOM ay halkaas ka wadaan howlgalo amniga lagu sugayo.
“Ma jirin wax dagaalo ah oo ka dhacay goobahaas, nabadiidka Al-Shabaabna wey isaga carareen markii ay arkeen ciidamada Qaranka Soomaliyed iyo kuwa AMISOM oo degaanadaas ku fool leh” ayuu intaa ku daray Gudoomiyaha gobolka Sh/hoose ee dowlada Somalia C/qaadir Maxamed Nuur Siidii.
Shirkii maamul sameynta Jubooyinka oo goor dhow si rasmi ah uga furmaya magaalada Kismaayo.
Shirweynihii maamul sameynta gobolada Jubbooyinka ayaa goor dhow si rasmi ah uga furmaya magaalada Kismaayo ee gobolka J/hoose sida uu warbaahinta u xaqiijiyey afhayeenka maamulka KMG ah ee magaalada Kismaayo C/naasir Seeraar.
Afhayeenka ayaa intaa ku daray in shirka oo ka furmaya hoolka Jaamacada magaalada Kismaayo ay ka qeyb galayaan ergooyin gaaraya ku dhowaad 500 oo ka socda beelaha dega gobolada Jubooyinka iyo Gedo iyo siyaasiyiin fara badan.
Shirkan maanta la sheegay inuu ka furmayo magaalada Kismaayo oo dhowr jeer oo hore dib u dhacay ayaa ku soo aadaya xili xaafada Calanley iyo xaafado kale oo ku yaala magaalada Kismaayo ay isku hor fadhiyaan ciidamo beeleedyo maalmo ka hor halkaas ku dagaalamay oo khilaafkooda aan xal laga gaarin.
Daawo Sawirada Qaabkii ee Ciidamada Huwanta ula wareegeen Buur Hakaba iyo Shacabka Degmadaasi oo farxad kusoo dhaweeyay.
Ciidamada Dowlada Soomaaliya oo garab milatari ka helayay kuwa AMISOM ayaa maalintii shalay si buuxda waxa ee ula wareegeen Degmada Buur Hakaba ee Gobolka Baay ahna Degmo muhiim ah oo isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo.
Ciidamada Qabsaday Buur Hakaba ayaa gudaha u galy Degmadaasi iyagoona saldhigyo ciidan ka sameestay Buurta Magaalada iyo Goobo kale sidoo kalan waxa ee magaalada ka wadaan baaritaano iyo xaqiijinta amaanka.
Shacabka kusugan Degmada Buur Hakaba ayaa Ciidanka Degmadaasi qabsaday kusoo dhaweeyay waji farxadeed iyadoona la arkayay Shacabka iyo Ciidanka oo is dhax socda isna gacan qaadaya taa oo muujinaysa in shacabka badi soo dhaweeeyeen Ciidanka Dowlada ee Shabaab kala wareegay Degmada Buur hakaba.
Dowlada Soomaaliya ayaa marar badan ku cel celisay in ee ka go’antahay in ee isku furan Wadada xariirisa Baydhabo iyadoona Rajada Dowlada ee hada ka harsan tahay wax yar oo kaliya.
Dagaalamayaasha Al-Shabaab oo War Cad kasoo saaray Doorashooyinka Dalka Kenya Fariina u diray Shacabka iyo Dowlada Dalkaasi.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa soo saartay warsaxaafadeed ku aadan doorashooyinka aadka loo sugayo ee todobaadyada nagu soo aadan lagu wado inay ka dhacaan gudaha dalka Kenya, xilli loolanka dhanka siyaasadda ee dalkaasi uu saameyn ku leeyahay dagaalka Kenya ay ku soo qaaday Soomaaliya.
Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay mudada 5-tii sanadood ee Mujaahidiintu ay ka arriminayeen dhulka ku teedsan xuduudaha Kenya iyo Soomaaliya in nabad-galyo buuxda ay heysteen dadka ree Kenya, balse arrinkaas uu meesha ka saaray go’aankii dawladdoodu ay ku gaartay iney qeyb ka noqoto duulaanka lagu soo qaaday Soomaaliya.
“Dalkiinu wuxuu ku naaloonayay nabad iyo xasilooni, ma jirin maxaabiis Kenyaati ah oo Soomaaliya lagu heysto, wax walwal ah meydan ka qabin in dhibaatada Soomaaliya ay dalkiina ku soo baahdo, balse maanta iyadoo laga shallaynayo go’aankii dawladdiina; xaaladda dalkiinu way ka sii dareysaa, dhaqaalihiinu wuu sii liidanayaa, amaankiina faraha ayuu ka baxay” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.
Sidoo kale waxaa lagu sheegay warsaxaafadeedka in sidaas oo ay tahay ay xilligan shacabka reer Kenya heystaan fursad muhim ah oo ay go’aan kaga gaari karaan mustaqbalkooda, marka loo eego doorashooyinka madaxtinimo ee aadka la isugu dhaw yahay oo billowga bisha March ka dhici doonta dalka Kenya.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegtay tan iyo markii ciidamada Kenya ay cagta soo dhigeen dhulka Muslimiinta Soomaaliya in dadka reer Kenya ay waayeen amnigii guud iyo midkii gaar ahaaneed-ba, iyadoona colaaddii ay Kenya ka riday Soomaaliya ay u gudubtay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi.
“Si kasta oo ay ahaataba, isbadalka jawwiga siyaasadeed ee dalka ayaa ka dhigan fursad dhanka mustaqbalka oo muhim ah, waa mustaqbal aan dhiig danbe daadan doonin; hadda ayaad heystaan fursad aad ku fakartaan, dibna u eegtaan go’aanadii ay idin saartay dawladda sii dhaceysa” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka Shabaab.
Mujaahidinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay warsaxaafadeedka in marna aaney ku khasaareyn dagaalka oo ay isaga difaacayaan kuwa kusoo xadgudbay, halka dadka reer Kenya in marnaba wax faa’iido ah aaney ka heli doonin duulaanka dawladdoodu ay ku soo qaaday Soomaaliya.
“Haddii aad doorataan dhabaha Nabadda, adinka ayaa faa’iidada ugu badan helaya, haddiise aad ku sii socotaan dhabaha dagaalka waxaad ogaataan ineynu nahay rag dagaalka aan ka laba labeyn, oo diintooda aan ka leexan, wax walibana u huraya difaaca diintooda iyo dhulkooda” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka oo intaas ku sii daray “ Haku dagmina mudada kooban ee ciidamadiinu ay heysanayaan Kismaayo; dagaalku wuu dheeraan doonaa, wuuna khasaare badnaan doonaa”.
Warsaxaafadeedka ka soo baxay XSHM ayaa imaanaya waqti aad loo wada sugayo doorashooyinka madaxtinimo ee dalka Kenya, iyadoona doorashooyinkii sanaddii 2008-da ay ka dhasheen rabshado baahsan oo kumanaan dad ah ay ku dhinteen, waxaana markani laga baqayaa ciidamada dalkooda oo duulaan ugu maqan Soomaaliya in arrinta dalka ay faraha ka bixi doonto haddii lagu murmo doorashadaasi.
Sheekh Mahad Cabdi Kariim oo Shaaca ka Qaaday Sababaha Al-Shabaab iyo Taageerayaashooda uga baxeen Magaalada …
Gudoomiyaha Al-Shabaab ugu Magacaaban Gobolada Baay iyo Bakool Sheekh Mahad Cabdi Kariim ayaa ka hadlay ka bixitaankii Ciidankooda Degmada Buur hakaba iyo qabsashada ee qabsadeen Ciidanka Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Sheekh Mahad waxa uu xusay in ka bixitaankooda ee qeyb ka tahay Qorshihii dagaal ee Shabaab dajiyeen sanad kahor ugana baxeen Magaalada Muqdisho iyo Gobolo badan oo dalka ah , ka bixitaanka Buur hakabana waxa uu ku sheegay in taasi la mid tahay ayna tahay qorsho dagaal.
Gudoomiyaha Al-Shabaab ee Gobolada Baay iyo Bakool ayaa sidoo kale xusay in qabiilada ku dhaqan Gobolada Baay iyo Bakool ee Shabaab garab taaganyihiin qaarkoodna la socdaan oo Al-Shabaab ku wehliyana ka bixitaanka Buurhakaba sababo uu ku sheegay in eesan joogeyn Dhul cadaw qabsaday.
Al-Shabaab ayaa inta badan marka Magaalooyin iyo Deegaao laga qabsado waxa ee sheegaan in ee uga baxeen Qidad dagaal taas oon dib kazoo muuqan Al-Shabaab goobtaasina eesan dambe dib ugu soo laaban sida Magaalooyinka Muqdisho ,Kismaayo ,Baydhabo ,iyo Baladweyn ee dhamaan sheegeen in Xaalad ciidan uga baxeen iyo Qidado dagaal.
Oday koox caan ah ku Qafiifay oo Af Soomaali loo tarjumay & Odaygaan oo dadkii Qosolka ka dhameeyay (Daawo Muuqaal+Warbixin) !!
Mid ka mid ah Odayaasha caanka ka ah dalka Talyaaniga ee aalaaba looga bartay in uu si weeyn u taageero kooxda Ac Milan ayaa markii ugu horeeysay waxaa loo Tarjumay Af Soomaali ahaan wuxuuna Odaygaan Qosolka ka dhameeyay inta fahanta ama ku hadasha Luuqada Afka Soomaaliga.
Odaygaan oo Telefishinada hortooda si Live ah Ciyaaraha uga tabiyo waxaa ku camirtay koox Odayaal kale ah oo ku tilmaamay wax waalan oo dadka qeeylo raaxada uga qaaday balse Odaygaan ayaa ku ciil baxay xitaa Dumarka Wariyaasha ah ee ag taagnaa kaas oo Gabar ag taagneeyd ku yiri
" Yaa Taageertaa Naayaa ? " Odaygaan oo tabinayay ciyaartii dhex martay kooxaha Ac Milan Vs FC Barcelona (2-0) wuxuu fadhiistay dhulka isaga oo qeeylinaya waliba ooynaya balse Odayaashii kale ee Ciyaaraha la tabinayay ayaa ku yiri sidatan " War waxa ma Waashay, Waalida nagala kor tag waryaa "
Warqado ay ku qoran yihiin Hanjabaado oo lagu dhex arkaayo Qeybo kamid ah Nairobi.
Wararka naga soo gaaraya dhanka Magaaladda Nairobi ee xarunta dalkaasi Kenya ayaa sheegay in Xaafado ka tirsan Kenya lagu arkay Warqado oo ay ku qoran yihiin hanjabaado loo jeedinaayo Xukuumadda iyo shacabka Dalkaasi Kenya.
Fadumo Haji oo ka mid ah Soomaalida ku nool Xaafadda Islii ayaa shabakadda Soomaalidamaanta u xaqiijisay inay heshay Warqad ay ku qorantahay Hanjabaad ku socta Xukuumadda Kenya iyo Shacabka Dalkaasi oo iyaguna la filaayo inay dhawaan u dareeran Goobaha cod bixinta, waxa ayna Fadumo in Warqadahaasi ay horseed u yihiin dhalinta Foodooyinka ku soo wajahan Dalka Kenya oo ay ka socoto qaban-qaabada Doorashooyinka.
Dhanka kale Fadumo Haji waxa ay sheegtay in warqadahaasi ay ku qornaayen Luqada Soomaliga iyo Sawaaxiliga islamarkaana lagu soo daabacay Haddalo ad adag oo shacabka Dalkaasi uga digaaya inay isu tagin goobaha la doonayo in lagu codeeyo, iyada oona intaa ku dartay in iminka muwaadiniinta qaar ay isaga huleelayan Magaaladad Nairobi kuna sii jeedan Baadiyaha dalkaasi kenya sababo lagu sheegay Cabsi ka soo wajaheysa Warqadaha la daadiyay iyo Dhibaatooyinka ka djalan kara Doorashooyinka.
Madaxa Amaanka Xaafadda Islii ee Magaaladda Nairobi ayaa shaaca ka qaaday in Shacabka soomaaliyeed ay is dejiyaan, isla markaana la shaqeeyan Xukuumadda Kenya si looga bad-baado ayuu yiri weerarada iyo cabsiyada ka dhalankara Kenya inta ay socdaan Doorashooyinka waxa uuna Ciidamadda amaanka Islii ugu baaqay inay Kasbadaan Muwaadiniinta Soomalida si ay uga helaan garab.
Si kastaba ha ahaatee Shacabka dalka Kenya ayaa soo food saartay Cabsiyo kaga imaanaya dhanka Mucaaradka Xagjirka ah ee ka soo horjeeda nabadda gaar ahaan kuwa la midoobay Al-Qaacidada Somalia oo iyagu wacad ku maray inay maja xaabin doonan Xukuumadda Kenya inta lagu guda jiro Doorashooyinka Dalkaasi Kenya.
Midowga Yurub oo ka hadlay qorshahooda tababarka Militeriga Somalia.
Taliyaha cusub ee Howlgalka Midowga yurub ee tababarida ciidamadda Somalia (EUTM Somalia), ayaa ku dhawaaqay in go’aan laga gaaray Istiraatijiyada EU-da ee tababarka lagu siinayo cidamadda Somalia.
Taliyaha oo lagu magacaabo Brigadier General Gerald Aherne oo xalay Shir jaraa’id ku qabtay xarunta Dhexe ee Midowga Yurub oo ku taala Caasimadda dalka Belgium ee Brussels, ayaa sheegay inay diyaarinayan qorshe ku aadan howlgalka tababarida Ciidamadda Somalia.
Taliyuhu waxa uu Todobadkan u soo bandhigay Guddiga Siyaasadda iyo Amaanka ee Ururka Midowga Yurub (The EU Political and Security Committee) iyo Guddiga militeriga (The EU Military Committee) qorshe aan rasmi ahayn oo ku xiriira howlgalka tababarka Ciidamadda Somalia ee EUTM Somalia.
Taliyuhu waxa uu soo bandhigay in howlgalka tababarkaasi loo kala qeybinaayo dalalka Somalia iyo Ugandha.
isaga oo arintaasi sii qeexayo waxa uu xusay in sida ugu dhaqsiyaha badan Tababarayaal ugu kala dirayan Somali iyo Ugandha si loo sii wado tababarida Ciidamada Somalia.
Taliyahaasi oo u dhashay dalka Ireland waxa uu xusay inay Muqdisho ka howlgalayan haddii ay xaaladda nabada saamaxdo.
Taliyaha ma uusan sheegin tirada tababarayaasha ee loo dirayo Magaaladda Muqdisho, wuxuuse carabka ku dhuftay in xarunta dhexe ee howlgalka EUTM Somalia aan laga soo wareejin doonin Caasimadda Dalka Ugandha ee Kampala.
In ka badan 3,000 askari oo Somali ah ayaa waxa ay midowga yurub ku soo tababareen xerada Militeriga ee Bihanga ee Galbeedka Ugandha.
Abu Ahmed al-Amriiki oo ku soo biiray Hoggaanka dagaal- gelinta Alshabaab.
Iyadoo waayahan dambe Shaashadda Warbaahinadda laga dareemay inuu jiro Khilaaf Ba’an oo u dhexeeya Madaxda Kooxda Alshabaab (Soomaalida iyo Muhaajiriinta) ayaa waxay kooxdaasi soo bandhigtay xubno Ajaanib ah oo ku baaqaya in la sii kordhiyo waxa ay ugu yeereen Dagaalka Jihaadka.
Dagaalyahan u dhashay Dalka Mareykanka oo isku magacaabay Abu Ahmed Al-amriiki ayaa waxa uu Cajalad Fiidiyow ah soo dhigay Barta Internetka ee kooxdaasi iyo Baraha kale ee Jihadist Internet Forums ee Al-Qacida, isagoo ku baaqay in laga qeyb-galo waxa uu ugu yeeray Jihaadka caalamiga (Global Jihad).
Cajalladaasi oo bishan 25-dii la baahiyey ayaa waxa uu Abu Ahmed Al-amriki oo wejiga soo hagoogtay, isla markaana ay hareer-taagnaayeen Maleeshiyo Hubeysan, waxa uu Farriintiisa ku akhriyey Luqadaha English-ka iyo Arabic.
Warqabadka Hay’adda STT Intelligence Group ee inta badan xooraansata Farriimaha Kooxaha Argagixisadda, ayaa dheehatay, isla markaana turjuntay nuxurka Farriinta uu Dagaalyahankaasi u dhashay Maraykanka jeediyey.
Abu Ahmed Al-amriki, waxa uu sheegay inay Dowladaha Reer Galbeedka ku fashilmeen Dagaalkooda ka dhanka ah Ururka Alqaacida iyo Kooxaha Isbahaysiga la ah, wuxuuna ku goodiyey inay sida ugu dhaqsaha badan u bilaabi doonaan waxa uu ugu yeeray Kacdoon Caalami ah.
Waxa uu si kulul u weeraray dalka Maraykanka ee uu ka soo jeedo, wuxuuna ku dooday inuu Maraykanka hoos u sii dhacayo.
Abu Ahmed Al-amriki oo ka mid ah Dagaalyahannadda Shisheeyaha ee Kooxda Alshabaab ka barbar-dagaalama, waxa uu ku baaqay Dagaalyahannadda Shisheeyaha inay yimaadaan Somalia, kuna soo biiraan waxa uu ugu yeeray Dagaalka Jihaadka ee Alshabaab.
Abu Ahmed Al-amriki, ayaa u muuqda inay Kooxda Alshabaab ku beddeshay Xilkii uu Dagaalyahanka kale ee Reer Maraykan (Cumar Abu Mansuur Al-amriki) ka hayey Hoggaanka Borobogaandada ee Alshabaab, iyadoo uu Abu Mansuur Al-amriki dhowr jeer ku calaacalay inay Alshabaab khatar ku tahay noloshiisa.
Dagaalyahannadda haysta dhalashadda Maraykanka ee ku biiray Kooxda Alshabaab ayaa waxaa tiradooda lagu sheegaa ilaa 50-dagaalyahan, oo ay ugu magac-dheer yihiin Abu Mansuur Al-amriki, Abu Abdullahi Almuhajir iyo Abdullahi Ahmed Farah.
Si kastaba ha ahaatee, Hadalka Dagaalyahankaasi, ayaa ku soo beegmayo, iyadoo Kooxda Alshabaab soo wajahday dhaqaale-xumo, isqabqabsi dhinaca Awoodda, guuldarro dhinaca dagaalladda iyo Kala-shaki u dheexeeya xubnaha Soomaalida iyo kuwa shisheeyaha ee Muhaajiriinta.
DHAGAYSO:Wasiirada Arimaha Debada Foosiya xaaji aadan Oo hadal Ka Naxin Boqolal Shacaba Ku Dhawaq Day
Wasiirada Arimaha dibada ee Soomaaliya kahadashay arimo xasaasi ah oo ku aadan dalka soomaliya ayadoo kanixisay maamulkii hore oga tirsaneyd ee Somaliland.
Wasiirada arimaha dibada soomaaliya aya kahadashay arimo ka ilmeyeen dadka jecel wadanak soomaliya kuna shekeyse arimo farxad gelisay shacabka soomaaliyeed ayadoona dhulka kujiiday Maamulkii somaliland ay hore ruclo ugu jirte in ay kamid noqoto madaxdiisa.
Video Faroole oo Diinta Islaamka ku gefay (Diinta ma dhamo laakiin Dastuurka Puntland waa dhan yahay)
Wareysi R/wasaaraha Soomaaliya, Cabdi Faarax Sheyrdoon (Saacid)isagoo kahahadlaya Khilafka udhaxeya isaga iyo Madaxweynaha Somaliya VIDEO
Ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM oo saaka la wareegay degmada Buur-hakaba ee gobolka Bay.
Abaanduulaha ciidamada milateriga Jen. C/kariin Yuusuf Aadan (Dhego-badan) oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay saaka aroortii si amaan ah kula wareegeen degmada Buur hakaba ee gobolka Bay.
Goob joogayaal ku sugan degmada Buur hakaba ayaa warbahinta u xaqiijiyey in ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada oo wata hub culus ay saaka 7:00-dii subaxnimo gudaha u galeen degmadaas iyadoo aysan jirin wax iska caabin ah oo lagala hor yimid, ayna bilaabeen iney fariisimo ka sameystaan gudaha iyo hareeraha degmadaas.
Ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM oo ka dhaqaaqay degaanka Leego ayaa labadii maalmood ee u dambeeyey ku sii siqayey degmada Buur-hakaba, iyagoo aan dagaaalo ah la kulmin taaso keentay in ugu dambeyn saaka ay la wareegaan.
Xoogagii Al-shabaab ee degmada maamulayey ayaa lagu soo waramayaa iney degmada iskaga baxeen shalay ka dib markii ay ka war heleen duulaanka ku soo wajahan iyagoo u talaabay degaanada kale ee kooxdaas ay weli maamusho.
Saraakiisha ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM ayaa sheegay in howlgalkan lagu qabsaday Buur-hakaba uu qeyb ka yahay qorshe ay doonayaan iney iskugu furaan wadada dheer ee xiririsa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo si degaanada ku teedsan looga saaro xoogaga Al-Shabaab.
Wasiirka difaaca Somalia, C/xakiin Xaaji Fiqi ayaa isaguna sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay gudaha u galeen degmada Buurhakaba ee gobolka Bay, isagoo ciidamada ugu hambalyeeyey guusha ay gaareen oo uu xusay iney tahay mid u soo hoyatay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Buur hakaba oo ah degmo qadiimi ah oo Muqdisho u jirta qiyaastii 190km, Baydhabona 60-km ayaa noqoneysa degmadii afaraad gobolka Bay ee ay gacanta ku dhigaan ciidamada dowlada oo kaashanaya kuwa AMISOM iyo Itoobiya, iyagoo horey Al-shabaab ugala wareegay degmooyinka Baydhabo, Qansaxdheere iyo Berdaale.
Dekada Muqdisho oo 22-sano kadib habeenkii xalay ahaa lagu guuleestay in laga dhoofiyo xoola nool, kadib dadaal dheer.
Cabdulqaadir Sheekh Ismaaciil oo ah wasiir ku xigeenka ganacsiga Soomaaliya ayaa habeenkii xalay ahaa xarigga kajaray dhoofinta xoolaha nool oo laga hir geliyay dekada weyn ee Magaalada Muqdisho kadib 22-sano oo fowda dalku soo maray.
Kuxigeenka wasiirka ganacsiga ayaa waxa uu ku faanay in wasaarada uu ka shqeeyo ay ku guulestay in ay dekada weyn ee Muqdisho ka bilaawdo dhoofinta xoolahaasi oo wasaaradii ka horeeyay aysan ku dhaqaaqin wax uuna taa u aaneeyay xukuumada hada jirta oo u istaagtay in ay shacabka Soomaaliya rabitaankiisa ku shaqeyso.
Xoolaha ladhoofiyay habeenkii xalay ayaa ayaa lagu sheegay 549 neef oo lo’ ah kuwaas oo ku wajahan dalka Cumaan oo kamid ah dalalka loo iib geeyo xoolaha Soomaaliya.
Intii dalku uu fowdada kujiray ayaa waxaa xoolha nool laga dhoofin jitray dekadaha Puntiland iyo Somaliland, waxaana arintaani hada lagu guuleestay ay muujineysaa in dalka Soomaaliya uu qaaday tilaabooyin shacabka iyo dowladaba wax tar u leh.
Nin Soomaali ah oo ku guuleystay lacag dhan Boqol kun oo Doolar ka dib markii uu ciyaaray ...(Daawo Muuqaal+Warbixin)
Nin Soomaali ah oo ku nool dalkaas Mareykanka ayaa waxaa la sheegay inuu ku guuleystay lacag dhan 100,000 (boqol kun oo doolar) oo doolar ka dib markii uu ciyaarayey lotereeyo ama baqtinasiib taas oo uuna ku guuleystay lacagtaas xad dhaafka ah ee tirada badan.
Soomaaligaan oo lagu magacaabo Xasan Aadan oo ku nool magaalada Des Moines ee gobolka Iowa ee dalkaas Mareykanka ayaa waxaa la sheegay inuu ka qeyb qaatey oo uu dheelay lotareeyada ama baqtinasiibka magaaladiisa oo lagu magacaabo $100,000 Cash Game, iyadoona qiimaha halkii tigidh ee lootareeyadaasi uu yahay hal doolar, ninkaan oo sida uu sheegay aan waligiis horey u dheelin lootareeyadaas ayaa waxaa uu ka iibsaday tigidhkaas Lotareeyada kaalinta shidaalka lagu iibiyo ee lagu magacaabo Kum & Go oo ku taala magaalada uu degan yahay, ninkaan oo ay isugu aaday 5tii nambar ee lagu guuleysanaayey ayaa waxay arintaasi ay keentay inuu ninkaasi uu ku guuleystey qiimaha ugu badnaa ee lotareeyadaas oo ahaa 100,000 oo dolar.
Ugu dambeyntiina iyadoo ninkaasi uu sheegay inuu ku faraxsan yahay lacagtaan badan ee soo gashay ayaa sidoo kale waxaa uu sheeegay inuu lacagtaas iyo farxadeedaba uu kula damaashaadi doona xaaskiisa iyo 6 caruur ah oo uu dhalay, ninkaan ku noolaa wadanka Mareykanka ilaa iyo 13 sano ayaa markii uu ogaaday inuu ku guuleystay lacagtaas waxaa uu iska soo xaadiriyey xafiiska shirkada loteriga taas oo markii gudoonsiiyey jeeg ay ku qoran tahay lacagtaas uu ku guuleystey ninkaas.
Daawo sawrro R/wasaare Saacid oo kormeeray xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Midowga Yurub: Shan Safiir oo waraaqahooda Aqoonsi si wadajir ah ugu soo gudbiyey Madaxweynaha Soomaaliya.
Ciidamada XDS oo kusii wajahan degmada Buurhakaba iyo maleeshiyaadkii Shabaab oo isaga baxay.
Ciidamada XDS iyo kuwa AMISOM ayaa ku sii wajahan degmada Buurhakabo, iyadoo la filayo in saacadaha soo socda ay si buuxda ula wareegaan degmadaasi.
Dadka ku nool degmada Buurhakaba ee gobolka Baay iyo nawaaxigeeda ayaa waxaa maanta usoo carfaya neecowda xoriyada, iyadoo dadka ay ka muuqato dareen farxad leh, kadib markii ay xogooda usoo ruuqaansadeen ciidamada XDS oo wata gaadiidka gaashaaman ee dagaalka islamarkaana ay halkaasi isaga baxeen maleeshiyaadkii dhibka iyo kadeedka ku hayay dadka reer Buurhakaba.
Arintani ayaa ka dambeysay kadib markii kooxda Shabaab oo muddo ka badan Sedex sano ka ariminayey Buurhakaba ay isaga huleeleen degmadaasi, kadib markii ay dareemeen culeysyo military oo kaga yimid dhinaca ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo taageero ka helaya Midowga Africa.
Gudoomiyaha maamulka degmada Buurhakaba Cabdi Cali Garuun ayaa Radio Muqdisho u sheegay in maleeshiyaadkii shabaab ee dhibaatada ba’an ku hayay shacabka ku nool deegaankaasi ay isaga baxeen magaalada Buurkaba kadib markii ay tabar iyo itaal ay isaga caabiyaan u waayeen howlgalada ciidamada XDS oo kusoo wajahan degmadaasi.
Degmada Buurhakaba oo qayaastii 60 kiilo mitir dhanka bari kaga beegan magaalada Baydhabo ee xaruunta gobolka Baay ayaa ah goob istratiji ah marka loo eego dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka gobolada Baay , shabeelaha hoose iyo Banaadir .
Taliska ciidamada XDS oo markale baaq u diray dhalinyarada wali ku harsan maleeshiyaadka Shabaab.
Ciidamada oo howlgal ay ka sameeyeen Jowhar kusoo qabtay Keyd Miinooyin iyo walxaha qarxa ah oo ay lahaayeen Shabaab.
Ciidamada dowlada ayaa howlgal ay sameeyeen degmada Jowhar waxa ay kusoo heleen Keyd rasaas, Miinooyin iyo walxaha kale qarxa ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka Shabaab.
Taliyaha Ciidamada Nabadsugida Gobolka Shabellaha Dhexe C/wali Ibraahim Maxamed ayaa sheegay in xog ay heleen kadib ay ku guuleysteen in qeybo ka mid ah degmada Jowhar ay ka soo heleen Keyd ay lahaayeen maleeshiyaadja Shabaab kaas oo sida uu sheegay ay ka buuxeen, Miinooyin, Gumucyada Hoobiyaha, Beteriyo iyo walxo farabadan oo loo adeegsado Qaraxyada kuwaas oo lagu dhex qariyay digsiyo waaweeyn
Dhinaca kale Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha Dhexe Cabdi Jiinow Calasow ayaa soo dhoweyay howlgalka ay ciidamadu kusoo qabteen walxaha qarxa oo dhagarqabayaashu u adeegsadaan in ay ku baabi’iyaan shacabka, wuxuuna ku tilmaamay talaabo wanaagsan oo looga hortagay dhagarta khawaarijta.
Daawo Sawirada Beerta ugu weyn Dunida ee lagu Beero Ubaxyo oo la Furay iyo Muuqaalka Beertaasi oo indhaha u roon.
Todobaad ka hor ayaa Magaalada dubai ee Dalka Isku taga Imaaraadka Carabta waxaa laga furay beerta ugu weyn dunida oo lagu beero ubaxyada Beertaasi oo la siiyay magaca ah Dubai Merkal Guardian.
Cabirka beertaan ayaa waxaa uu gaarayaa 72 kun miter iskuweer, dhirir gaaraya 4 km, waxaana lag talaaalay in ka badan 45 malyuun oo Ubaxyo ah
Maamulayaasha beertaan ayaa sheegay in ay dadka soo booqanaya ay siiyeen hal isbuuc oo lacag la`aan ah oo dadka imaanaya aan wax qarashaad ah laga qaadaynin, balse todobaadkaasi uu soo dhamaaday waxaan uu ku ekaa maalintii jimcaha ahaa.
Maamulayaasha waxa kale oo ay shaaciyeen in hada ka dib lagu soo gali doono lacag dhan 20 dirham oo dadka waaweyn ah halka caruurtana wax qarashaad ah aan laga rabin gaar ahaan kuwa ka yar 3 -da sano.
Faah Faahin kasoo Baxday Soomaali iyo Madoow Ameerikaan isku Farasaaray iskool ku yaal Minneapolis(Daawo Muuqaal+Warbixin)
Maxay Al shabaab Nabada Dalka Soomaaliya u qaadan la dahay,(Daawo Culumaa'udiin iyo Siyaasiin ka jawaabaya Arinkaas)
Iyadoo Dalka Soomaaliya uula daala dhacayey labaatankii sanno ee la soo dhaafay Colaado iyo abaaro ayaa waxa uu dalka Soo maray wax ay marqaati ka wada yihiin dhamaan Shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ayaa hadana waxaa maalmihii danbe soo baxayey qeyla dhaan kazoo yeeraysa Culumaa’udiinka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ugu caansan.
Hadaba Barnaamij loogu magac daray barnaamijka Arimaha Bulshada oo markani si qaas ah loogu doodayey Su’aalooyin Kulul oo si weyn usoo jiidatay waxana su’aalahasi ka mid ahaa Maxay Al-shabaab Nabada u qaadan ladahay? Ma laga yaayaa in ay nabada qaadaataa? Waa maxay Fikirkooda ku aadan in la wada noolaado oo si wada jir ah wax la isugu qabsado.?
Barnaamijkani ayaa waxaa ka qeyb galaya Culumaa’udiin Caan ah iyo siyaasiin Soomaaliyeed sidoo kale waxaa ka qeyb galay Laba wasiir oo xilal waa weyn ka haaya dowlada Soomaaliya.
Barnaamijkani ayaa waxaa daadihinaya Cabdi Xafiid Maxamud Jaamac wuxuna barnaamijkani Soconayaa in ka badan sedex Saacadood.
Miinooyin aad u fara badan oo laga helay goob ay kusii qariyen Dagaalamayaasha Al-Shabaab
Taliyaha nabad sugidda gobalka Sh.dhexe, Cabdi Weli Ibraahim Maxamed oo saxaafada lahadlay ayaa waxa uu shaaciyay in ay soo heleen ciidamada nabad gelyadu miinooyin aad u fara badan oo qeyba kamid ah gobalkaasi ay ku keysadeen kooxda Al-shabaab.
Cabdi Weli Ibraahim Maxamed, waxa uu hoosta ka xariiqay in miinooyinkaasi laga dhex helay guryo lagu aasay oo ku yaalla gudaha magaalada Jowhar ee xarunta gobalkaasi oo mudo afar sano ah ay ka talinayeen Shabaab.
Sarkaalka ugu sareeya nabad sugidda gobalka Sh. Dhexe ayaa waxa uusan sheegin cid ay lasoo qabteen miinooyinkaasi, isaga oo intaa sii raaciyay in ladoonayay in lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed.
Baaritaanku in uu sii soco doono ayuu shaaciyaay taliye Cabdi wali oo wacad kumaray in her iyo habeen ay u taagnaa doonaan ladagaalanka Shabaabka iyo taageerayaashooda si loo helo amaan buuxa oo kahir gala gobalka oo dhan gaar ahaan magaalada xarunta ah ee Jowhar.